AHOANA NY FOMBA HAMAFANA NY FAMPIDINANA AMIN'NY ANDROID (GUIDE) - MALEMY
Ahoana ny fomba hamafana ny fampidinana amin'ny Android
Mampiasa finday avo lenta ny tsirairay amin'ny tontolon'ny teknolojia ankehitriny mba hanatanterahana asa isan-karazany toy ny fiantsoana an-tariby, fandefasana hafatra an-tsoratra, fivezivezena amin'ny Google, streaming YouTube, ary ireo asa manan-danja maro hafa. Ary sosotra daholo isika rehetra rehefa misy telefaona lany amin'ny fitahirizana finday ho fampandrenesana amin'ny finday avo lenta.
Mety misy antony maro mety hahatonga izany. Azonao atao ny mieritreritra ny mamafa ny horonan-tsary avy amin'ny galerianao, fa inona no hatao raha io na dia tsy manome valiny mahafa-po aza ianao? Ny fanesorana ireo fampidinana dia mety hanaporofo fa manampy amin'ny toe-javatra toy izany ary hanampy anao hahazo toerana malalaka ho an'ny fitaovanao Android.
Misavoritaka foana ny ankamaroan'ny olonaahoana ny fomba hamafana ny fampidinana amin'ny Android?Raha mitady fomba hamafana ireo fampidinana amin'ny telefaona Android ianao dia nahatratra ny pejy mety. Izahay dia nitondra mpitari-dalana manampy anao, izay hanazava ny fomba mety rehetra sy hanazava ny fisalasalanao rehetrany fomba hamafana ny fampidinana amin'ny Android. Tsy maintsy mamaky hatramin'ny farany ianao mba hahatakarana mazava tsara ny fomba tsirairay.
Fomba 5 hamafana ireo fampidinana amin'ny Android
Fomba 1: Famafana ireo rakitra amin'ny alàlan'ny fisieo
Fomba 2: Famafana ireo fampidinana amin'ny alàlan'ny fanovana
Fomba 3: Famafana ireo fampidinana amin'ny alàlan'ny Apps Tray
Fomba 4: Famafana ny angona cache amin'ny Device
Fomba 5: mamafa ny fampidinana mivantana avy amin'ny Google Chrome
Mila mitandrina be ianao rehefa mamafa ny fampidinana avy amin'ny fitaovanao satria mety misy rakitra ilaina toy ny Admit Cards, Reports, ary ireo antontan-taratasy ilaina hafa. Misy fomba efatra hafa hamafana ireo fampidinana ao amin'ny Android, ary tsy maintsy manandrana ny fomba tsirairay ianao hahazoana ny vokatra tsara indrindra.
1. Sokafy ny lisitry ny fampiharana anao ary tadiavo My Files .
2. Paompy Fampidinana hahazoana ny lisitr'ireo entana alaina ao amin'ny finday Android-nao.
3. Safidio ireo rakitra te hamafa ny fitaovanao ianao. Raha te hamafa fisie maro ianao, tsindrio lava ny rakitra rehetra amin'ny lisitra ary avy eo safidio ny rakitra hafa rehetra te hamafa ny fitaovanao ianao.
4. Raha vonona ny hamafa ireo rakitra rehetra ianao dia tsindrio rehetra eo ambonin'ilay lisitra hisafidianana ireo rakitra rehetra ao amin'ilay lisitra.
kofehy diso niraikitra tamin'ny mpamily fitaovana
5. Aorian'ny fisafidianana ireo rakitra dia tsindrio ilay Mamafa Safidy avy eo amin'ny bara menio ambany
6. Mila mikitika ny Mifindra any amin'ny fitoeram-bokatra Recycle safidy.
Ity dia hamindra ny fisieo mankany amin'ny fitoeran'ny Recycle, izay mitazona ireo rakitrao mandritra ny 30 andro ary mamafa azy ireo . Na izany aza, azonao atao ny mamafa ireo rakitra eo noho eo amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza.
Famafana ireo rakitra tsy tapaka
1. Sokafy ny File manager ary paompy ny menio telo-teboka eo amin'ny zorony ambony havanana amin'ny efijeryo.
2. Ankehitriny, paompy Recycle Bin avy amin'ny safidy azo atao.
3. Amin'ny efijery manaraka, paompy hanaisotra hamafana ny fako tsy ho ela amin'ny fitaovanao. Farany, paompy Banga Recycle tsy misy manamarina.
1. Voalohany indrindra, sokafy ny fikirakirana findainao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny Fikirana sary masina
google chrome dia nijanona tsy miasa intsony
2. Kitiho ny app safidy amin'ny efijery manaraka.
3. Safidio ny fampiharana izay tianao hamafana maharitra ny rakitra ao amin'ny fitaovanao.
4. Kitiho ny esory omena eo amin'ny baran'ny menio ambany ary tsindrio ok eo amin'ny boaty fanamafisana.
Vakio ihany koa: Fafao hatrany ny hafatra amin'ny Facebook Messenger amin'ny lafiny roa
Raha tsy izany, azonao atao aza ny mamafa ny rakitra mivantana avy eo amin'ny lozisin'ny apps.
1. Vohay ny takelaka fampiharana anao ary safidio ny fampiharana te hamafa ianao.
2. Gazety lava amin'ny fampiharana kisary hahazoana safidy.
3. Safidio esory avy amin'ny safidy nomena.
Windows 10 home dia mamono fanavaozana mandeha ho azy
4. Takiana aminao ny paompy ok eo amin'ny boaty fanamafisana.
Azonao atao ny mamafa ny angona cache amin'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana nomena:
1. Mandehana amin'ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fanoratana ny Fikirana kisary avy amin'ny fantson'ny fampiharana
2. Ankehitriny, mila mitady ianao Fikarakarana bateria sy fitaovana avy amin'ny safidy nomena.
3. Paompy Fahatsiarovana amin'ny efijery manaraka.
4. Farany, kitiho ny Madio izao bokotra hamafana ny angona cache.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hijerena ireo fika nesorina na taloha tao Snapchat?
Azonao atao koa ny mamafa ny rakitra voafafa avy amin'ny Google Chrome anao:
1. Misokatra Chrome ary paompy ny menio telo-teboka .
2. Kitiho ny Fampidinana Safidy ahazoana ny lisitry ny fisintomana rakitra amin'ny fitaovanao.
windows 10 tsy dia tadidinao loatra
3. Safidio ireo rakitra tianao hamafana ary kitiho ny Mamafa kisary eo amin'ny zorony ambony havanana amin'ny efijeryo.
F1. Ahoana ny fomba hamafana ny fampidinana ahy amin'ny findaiko Android?
Ans: azonao atao ny misintona amin'ny alàlan'ny mpitantana ny rakitra, ny lozisialy, ny fikirana ary avy hatrany amin'ny Google Chrome anao.
F2. Ahoana no hamafana ny fampirimana fampidinana ahy?
Ans: azonao atao ny mamafa ny alainao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpitantana ny fisieo ary hanokatra ny Fampidinana fampirimana.
F3. Ahoana ny fomba hamafana ny tantaran'ny fampidinana amin'ny Android?
Ans: azonao atao ny mamafa ny tantaranao amin'ny alàlan'ny fitsidihana chrome, kitiho ny menio telo-teboka, ary fisafidianana ny fampidinana eto.
Ahoana ny famonoana ny fakan-tsariko amin'ny zoom?
Ahoana ny fanovana ny endritsoratra amin'ny WhatsApp
Manamboatra tsy afaka misintona fampiharana amin'ny telefaona finday Android
Ahoana ny fomba fametrahana horonantsary YouTube amin'ny Repeat amin'ny Desktop na finday
Manantena izahay fa nanampy ity torolàlana ity ary afaka ianareo hamafa ny fampidinana amin'ny Android. Hanampy anao izany raha manome ny hevitrao sarobidy ao amin'ny faritra misy hevitra ianao.
android kopia sary amin'ny clipboard
efijery mainty tampoka eo am-pilalaovana lalao
chromecast tsy misy fitaovana hita windows 10